Dowladda Federaalka oo Axmed Madoobe u aqoonsattay madaxwaynaha Jubaland. - Tilmaan Media
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay u aqoonstay Axmed Madoobe in uu noqdo madaxwayne Kumeel gaar ah muddo labo sano ah oo ka billaabanaysa wakhtigii uu ka dhamaaday xilligiisu kahor doorashada lagu murmay.
Qoraalkan ayaa sidoo kale waxaa dhaleecayn loogu soo jeediyay wax lagu sheegay farogalin ay kenya ku hayso gudaha Soomaaliya si ay danaheeda qaran uga gudatto gudaha Soomaaliya.
Arrintaan ayaa kusoo aadaysa xilli ay lafilayo in ay wadahadallo u bilawdaan madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si looga tashado arrimaha doorashooyinka dalka kusoo wajjahan.
Waxaan wali jawaab kasoo bixin ku aadan arrintan madaxda dowlad goboleedka Jubaland. Sidoo kale waxaan la garanayn siday u arki doonaan dadka iyagu kasoo horjeeday maamulka jubaland ee Axmed Madoobe hogaamiyo.